काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले आज मंगलबार थप तीनवटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका ५, झुम्का, दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका ५, लमही र पूर्वी रुकुम जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका ६, छिप्रिदहमा आफ्ना नयाँ शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । तीन वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका शाखा कार्यालयहरुको...
काठमाण्डौ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले आप्mना सम्पूर्ण बैंकिङ्ग कारोवारहरु कृषि विकास बैंक लि. मार्फत गर्ने गरी बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय र कीर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख रमेश महर्जनले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । देशको पुरानो बैंक र राजनैतिक तथा प्रशासनिक महत्व राख्ने पुरानो नगरपालिका बीच...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्नो १० औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले आउँदा फागुन ९ गते वार्षिक साधारणसभा डाकेको हो। सभा काठमाण्डौको सुन्धारास्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। बैंकले गत...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा रु. १.७४ अर्ब, निक्षेप र कर्जा प्रवाह बढ्यो
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ७४ कोरोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा २०.८४ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेका वाणिज्य बैंकहरु पछिल्लो समय भने व्यापार बढाउन निकै आक्रामक देखिएका छन्। तरलता कम गर्न ब्याजदर घटाएर अहिले वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम कर्जा लगानी बढाएका छन् भने निक्षेप संकलनमा पनि आक्रामक देखिएका छन्। यसबीच नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरु प्रायः सबैले चालु आर्थिक...
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबीच पनि सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्नो व्यापार आक्रामक ढंगले अगाडि बढाएको छ। बैंकले कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन बढाउनुका साथै खराब कर्जा ह्वात्तै घटाएको छ। आज सार्वजनिक बैंकको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले खराब कर्जामा निकै सुधार गरेको देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा...
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६२.५० प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३९...
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १९.८३ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ८८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको...
प्राइम कमर्सियल बैंकको नाफा रु. १.८१ अर्ब, वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३९.४० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य...
कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा आक्रामक एनआईसी एसियाको नाफा बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २.१९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा...
खराब कर्जामा सुधार गरेको कृषि विकास बैंकको नाफा रु. १.३२ अर्ब, ईपीएस रु. २१.०९
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १६.४४ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा...
लक्ष्मी बैंकको निक्षेप र ऋण लगानी बढ्यो, खराब कर्जा पनि घट्यो, नाफा कति ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ८० करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०.६२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ९० करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ५०...
माछापुच्छ्रे बैंकको दोस्रो त्रैमाससम्म वित्तीय अवस्था यस्तो छ
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ८० करोड २७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २.३२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य...
एनसीसी बैंकको रु. ६१.४० करोड, वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १८.८२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ७५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको...